HESHIISKA JANAN MA CALEEMO QOYAN MISE XANIINYO TAABADKA EHELKA ROOBOW | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii HESHIISKA JANAN MA CALEEMO QOYAN MISE XANIINYO TAABADKA EHELKA ROOBOW
HESHIISKA JANAN MA CALEEMO QOYAN MISE XANIINYO TAABADKA EHELKA ROOBOW
Heshiiska C/Rashiid Janan iyo Dowladu maxuu ka dhigan yahay ma Dowlad iyo Mucaarad heshiiyey baa. Ma qabiil heshiiyey baa. Ma laba qofood oo wax u qarsoon ky dirirsanaa oo farmaajo iyo Janan ah oo ku heshiiyey baa. Maxuu kaga duwan tahay Mukhtaar Roobow oo isagu go’aansaday in uu nabada ka qeyb qaato isuna soo dhiibay oo haatan xabsi ku xanuunsanaya. Maxaa ilaa heer intaa la’eg loogu weyneynayaa. Waa su’aalaha dowlada looga baahan yahay inay bulshada la wadaagto.
Dhinaca kale janan waxaa laga xiray garoonka dayuuradaha ee Muqdisho oo uu sii mare ku ahaa 30/8/2019 sida ay cadeysay Jen. ZAKIYA oo aheyd afhayeenka booliska maalintii xigtay. Fakashadiisa kadib waxaa lagu eedeeyay xasuuq iyo dhibaato bini aadminimo in uu sameeyay. Sidoo kale Xukuumadu waxay ku tilmaantay qaran dumis ku soo duulay dalkiisa isagoo u dagaalamaya dal shisheeye oo kenya ah.
Hadaba Warrant-igi Maxkamada iyo dalabkii booliska Soomaaliyeed ay u gudbiyeen Interpol iyo soo qabashadii heer caalami ee interpol ee Janan wey taagan tahay. Sifo heshiiskan lagu tilmaami karo ma jiro. Oo aan aheyn gurbaan gacantada ha kugu jiro ama gacalkaa ha kuu hayo. Sharciguna waxuu noqday mid ku xiran hadba rabitaanka qofka markaa xilka haya. Hadii Madaxweyne caadil ah dalka xukumi lahaa. Janan waxaa laga qaadi lahaa ugu yaraan talaabo adag. Halka Haatan caleemo qoyan ay dowladu ku soo dhoweysay Qabyaalad awgeed. Muqtaar Roobowna uu weli xabsiga ku rafaadsan yahay. Cadaaladu wey shaqeyn mar ay Tahayba
Qore Wariye Cabdirashiid Deel
Previous articleDhaxanta waxay u jiifaan helitaanka wax loo dhan yahay
Next articleQaramada midoobey maxay ka tiri hadalkii Dowladda Kenya
Labo qof oo mid yahay taliye Kuxigeenka Ciidanka Ilaalada xeebaha Galmudug ee Degmada Hobyo ayaa ku dhaawacmey rasaas uu ku furay markab. Markabkan ayaa ka...
Milateriga waddanka Koonfur Afrika oo wax ka badel ku sameeyay siyaasaddooda...
Imaaratka Carabta oo noqday dalkii ugu horreeyay ee Carab ah...
Ciidamada AMISOM oo u diiday Ciidamada Musharixiinta inay Hubka la galaan...
Madaxweynayaasha Faransiiska iyo Turkiga oo Qadka Taleefanka ku wada hadlay Mudo...
Dowlada Turkiga oo war ka soo saartay Qaraxii Xalay...